အဘယ်ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ကိုသုံးသင့်သနည်း။ - လွယ်ကူစွာခင်းကျင်းပြသခြင်း
မှတ်ချက် sur အဘယ်ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ကိုသုံးသင့်သနည်း။Posted in, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် Par Clemပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ၂၀၂၀ မေလ ၂၇ ရက် ၂၀၂၀ မေလ ၂၇ ရက်
3 ။ Software များ
လှပသောဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်များတွင်သင်စတင်လိုပါကမည်သည့်ပုံစံကိုကောင်းစွာနားလည်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည် ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ဟာ့ဒ်ဝဲ သင်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်ဤအရာသည်အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒီဆောင်းပါးမှာသင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။ သင်နှင့်သင့်စီးပွားရေးအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာတွင်မည်သည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ကိုသင်အသုံးပြုသင့်သည်ကိုသင့်အားရှင်းပြပါမည် လွယ်ကူစွာခင်းကျင်းပြသ။ သင် software ကို download လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒီမှာ.
ပထမ ဦး စွာသင်လိုအပ်သောအရာနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်ကွန်ပျူတာကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်အသုံးပြုလိုသောမျက်နှာပြင်မည်မျှပေါ် မူတည်၍ သင့်ကွန်ပျူတာရွေးချယ်မှုသည်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးကွန်ပျူတာကိုရွေးချယ်ရန်သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။
သင်အဆင်သင့်သုံးကွန်ပျူတာကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်လုပ်ချင်သောအရာပေါ် မူတည်၍ သင့်ကွန်ပျူတာကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
သင်သည်မတူညီသောကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများကို ၀ ယ ်၍ သင်၏ကွန်ပျူတာထဲတွင်ထည့်နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုရန်သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကောင်းစွာနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ သင့်ကိုအဆင်သင့်သုံးကွန်ပျူတာကိုသင် ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ဤပြင်ဆင်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုရန်မည်သည့်ပြhaveနာမျှမရှိပါ ဖန်သားပြင်တစ်ခုမှသုံးခုမျက်နှာပြင်သုံးခုထက်ပိုပြီးအသုံးပြုလိုလျှင်၊ သင်သည်သင်၏တည်ဆောက်မှုကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။
စကားမစပ်, Easy Multi Display သည်လတ်တလောပြင်ဆင်မှုများနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ဒီတစ်ခုသာဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျစိတ်ကူးကြည့်နိုင်သကဲ့သို့, သင်မျက်နှာပြင်လေးခုသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ငါးခုကိုအသုံးပြုချင်လျှင်, သင်ပိုကောင်းတဲ့ configuration ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခုကပိုကောင်းတယ် မျက်နှာပြင်ငါးခုမှမျက်နှာပြင်တစ်ခု
ဒီ configuration နဲ့အတူသင်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည် တစ်ပြိုင်နက်တည်းမျက်နှာပြင်ခြောက်ခုအထိ။ ဤသူသည်သင်တို့လိုအပ်သောအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်!
သင်၏ကွန်ပျူတာကို display များနှင့် software များဖြင့် run နိုင်ရန်အတွက်သင်၌ display များရှိသလောက် HDMI cable များလိုအပ်လိမ့်မည်။ HDMI ကေဘယ်ကြိုးများကိုသက်သာစေမည့် wi-fi စနစ်ကိုလည်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပထမဂူဂဲလ်တွင် HDMI port များမလုံလောက်ပါကဒုတိယဂရပ်ဖစ်ကဒ်လည်းလိုအပ်သည်။ မနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့အားသင့်စရာများကိုရှောင်ရှားရန်သင်၏ကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်ကတ်တွင်ကွန်ပျူတာအကြံပေးနှင့်အတူ HDMI port များ၏နံပါတ်ကိုစစ်ဆေးပါ။
သင်၏ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများကို ၀ ယ်ရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည် ဥအသစ် ဝဘ်ဆိုက်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအစိတ်အပိုင်းများကိုရှာတွေ့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုတိုက်ရိုက်ဝယ်နိုင်သည်။ သင်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုရွေးချယ်ရန်သို့မဟုတ်အကြံဥာဏ်များကိုသာရွေးချယ်ရန်အကူအညီလိုအပ်ပါကမတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးသည် Easy Multi Display နှင့်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်ဤတွင်သင့်ဆိုင်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမည့်အကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင်ကိုရွေးချယ်ရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဖ်ဝဲသည်သင့်အားမျက်နှာပြင်ခြောက်ခုရှိပါကမျက်နှာပြင်တစ်ခုစီကိုလေးပိုင်းခွဲခြားရန်အရင်းအမြစ် ၂၄ ခုကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းပြသနိုင်သည်။
အောက်တွင်သင် Multi Multi Display ကိုဖန်သားပြင်လေးခုနှင့်ဂိမ်းကစားသည့်ကွန်ပျူတာတို့ဖြင့်လှုပ်ရှားသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပထမပုံရိပ်နှစ်ခုသည်မျက်နှာပြင်တစ်ခုတွင်မီဒီယာတစ်ခုသုံးပြီးတတိယပုံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုနံရံတွင်လုပ်ဆောင်သည်။
လွယ်ကူသော Multi Display Videowall
သင်လိုအပ်သောဟာ့ဒ်ဝဲရှိပြီဆိုလျှင်၊ သင်သည်အားကောင်းသော်လည်းစျေးသိပ်မကြီးသောဆော့ဖ်ဝဲကိုလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Easy Multi Display software ကိုအကြောင်းပြချက်များစွာပေးလိုပါသည်။
၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အင်အားအကောင်းဆုံး digital signage software တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်း update လုပ်ဖို့က update လုပ်နေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကသင့်အားတပ်ဆင်ခြင်းမှအသုံးပြုရန်ကူညီသည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း Easy Multi Display သည်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဘာကြောင့်လဲအသေးစိတ်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
အခြားဆော့ဖ်ဝဲလ်များ၏ဖြစ်နိုင်ချေများကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ပျက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအကောင်းဆုံးပေးချင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ software ကိုမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ Easy Multi Display ကို အသုံးပြု၍ မီဒီယာရင်းမြစ် ၂၄ ခုကိုဖန်သားပြင် ၆ ခုတွင်တစ်ပြိုင်တည်းထုတ်လွှင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Videowall ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ဖန်သားပြင်များကိုပေါင်းစည်းရန်နှင့်ဥပမာအားဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။
သင့်အနေဖြင့်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောအခွင့်အရေးများကိုရရှိရန် "Multi Users" ကဲ့သို့သောအခြားလုပ်ဆောင်မှုများစွာကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ သင်၏အဝေးထိန်းခလုတ်ကိုလည်းတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်၏မီဒီယာပေါ်ရှိစာများကိုလည်း scroll လုပ်နိုင်သကဲ့သို့သင်၏ display ကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားနိုင်သည်။
ရုပ်ပုံများ (JPG, GIF, PNG ... );
ဗီဒီယိုများ (MP4, AVI, MOV ... );
စာရွက်စာတမ်းများ (PPT, DOCX, PDF ... );
Software (Microsoft Words၊ Microsoft Excel၊ Microsoft PowerPoint ... ) ။
အခြားဆော့ဗ်ဝဲအများစုကသင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်အရေအတွက်အရစာရင်းသွင်းငွေပိုပေးရမယ် (သို့) ဈေးသက်သာရင်ဆော့ဗ်ဝဲရဲ့ဈေးကိုပေးဖို့သင့်ကိုအကြံပြုလိမ့်မယ်။ သင်နှင့်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီအတွက်လျှင်မြန်စွာစျေးကြီးလာသည်ကိုသင်နားလည်လိမ့်မည်။
Easy Multi Display တွင်သင့်ကုမ္ပဏီနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင်ပြုလုပ်ထားသောဖော်မြူလာသုံးခုကိုအထူးကမ်းလှမ်းထားသည်။
Easy Multi Display သည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ software ကိုရိုးရှင်းသောအဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်ပြုပြင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ software ကိုသုံးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုအပြည့်အ ၀ အသုံးချနိုင်ရန်အတွက် Easy Multi Display ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။
ပြanyနာတစ်ခုခုရှိရင်ငါတို့ download လုပ်လို့ရတယ် အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်, သွားရောက်ကြည့်ရှု အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏အပိုင်းသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ support@easy-multi-display.com ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအတွက်။
ပင်း display port ဆိုတာဘာလဲ။ - ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်နှင့်ဗွီဒီယိုနံရံဆော့ဝဲ